UKross Tollemache 42F - Kinne Maskinteknik AB
I-Cross Tollemache 42F
I-Crusher Tollemache 42F mpo shaft yokugunda yakhelwe ngokukhethekile ukwelashwa kwemfucuza yasendlini kanye nokukhanya okulula kwezimboni.
Izindlu ze-crusher zinezingxenye ezimbili, isigaba esingaphezulu sama-conical kanye nengxenye ephansi ye-cylindrical. Lezi zithwala ama-rotor aphezulu nangaphansi.
Ingxenye engenhla yesigaxa esakhiwe njengamakholomu ifaka ibhuloho okufakwa kulo ukubekwa okungaphezulu. Le ngxenye yakha indawo yokuhlunga kuqala, lapho izinto ezibonakalayo zingaphonswa khona emgodini. Ngale ndlela, umshini uvikelekile. Ingxenye yangaphansi yesilinda ithwala iyunithi lokuzala eliphansi futhi isebenza njengegumbi lokugaya, lapho ingxenye enkulu yokugaya yenzeka khona. Injini ye-crusher ifakwa kufreyimu, ebekwe ngaphansi kwekhilasi.
Izindawo zokugcina izimpahla zitholakala ngaphandle kwendlu ebumbene futhi zifakwe uphawu lwelebhu nezindandatho, okuvimbela ukungcola ekungeneni. Indlu ephezulu ethwele i-roller kuzalela okufanayo nomugqa owodwa we-axial roller rolling. Amabhere angaphansi afakwa kawoyela futhi asebenzisa amandla okuphehla amandla okuphehla amandla okusakazwa kawoyela ezindlini ezithwele naphakathi kwalokhu nethangi likawoyela, elitholakala ngaphandle kwezindlu ezichotshoziwe ngakho-ke litholakala kalula.
Ama-rotor aqukethe shaft emile enamadiski ayi-14, ahlukaniswe izigaba ezi-3. Isigaba ngasinye sifakwe ngezikhonkwane ezi-6 zesando, lapho izando eziguqukayo zitholakala ngokukhululeka. Izikhonkwane ziqiniswe ngabanikazi be-centrifugal, okuthi ngokwezinga elikhulu kube lula ukushintshwa kwesando.
I-crusher isebenza kanjena:
Imfucumfucu engeke yondliwa ifakwa engxenyeni ephezulu yomshini, lapho izingxenye ezinkulu zemfucuza zishaywa ngokushesha izando futhi zihlukaniswe izingcezu ezincane. Lokhu kuslayida kuqhubeke phansi ngaphansi kwesigaxa. Lapho imfucumfucu iphukile yaba izingcezu ezincane ezanele, lezi ziwela phansi ngomphimbo wegumbi lokugaya crusher. Lapha imfucumfucu ifakwa amanzi ngaphambi kokukhishwa phansi.
Izando ezisengxenyeni engezansi yekrisimasi zifakwa emizimbeni efana nefosholo. Lokhu kulungiselela kusiza ukukhipha imfucuza ye-atomized futhi, ngaphezu kwalokho, kunikeza ukuhamba komoya ngokugaya, okuvimbela uthuli ukuthi lungabhebhetheki ekungeneni nasekuvulekeni kwendawo.
I-crusher yenzelwe ukuphatha kahle nokulahla imfucuza yasendlini, imfucuza yokwakha, amabhayisekili, izithuthuthu zemoto, njll.
Ukusebenza kahle kwesitshalo okuchobozekayo kuncike kakhulu ekuqondeni komatshini nomqondo ojwayelekile. Ezinye izinto akufanele zikondliwe ku-mill. Esikhathini esiningi, lokhu kusebenza ezintweni ezingadala amabhlokhi ku-mill kepha akuwona monakalo omkhulu. Ngakho-ke, kusebenza ikakhulukazi ekulahlekelweni yisikhathi ukuhlanza ukuqothuka. Kulomongo, ubude bento bubaluleke ngaphezu kokuqina kwayo.
Uhlu olulandelayo aluphelele futhi kufanele lubhekwe njengesibonelo sezinto ezingafanele ukuba zichotshozwe.
Ifenisha, umatilasi, njll. Equkethe iziphethu zekhoyili.
Amathayi avela ezimotweni nasezimotweni ezinkulu.
Izinto ezinde kune-120 cm (amamitha ama-4), njengocingo lwensimbi, amapulangwe ezinkuni, izintambo ze-hemp ezisindayo kuno-10 mm, izingcezu ezinkulu zepulasitiki, amapayipi epulasitiki, izingxenye zensimbi nokuningi.
Izimpahla eziqhumayo, ezinjengeziqukathi eziqukethe uphethiloli, uthini, uphethiloli, njll., Amabhomu, izinhlamvu, njll.
Izingxenye zemoto, ezinjengezinjini zonke, ama-axles asemuva nokuningi.
Kuyaqapheleka ukuthi njengomthetho akukho bunzima ekunikezeni amakhaphethi nokunye okunjalo, inqobo nje uma kuphakanyiswa ngokukhululekile, okungukuthi hhayi ukugoqwa noma kuhlanganiswe ndawonye.
Ukuvulwa kokungena kwe-crusher kungama-150 cm x 90 cm. Isitshalo sigaya phansi konke okungadlula kulokhu kuvulwa. Noma kunjalo, izinto ngokweqile noma lezo ezichazwa njengezingafanele kungadala ukuvimba kwetheku lokufaka futhi umshini kufanele azisuse ngaphambi kokufakwa.
Umthamo ungamathani ayi-15- 20 wemfucuza ngehora
I-Crusher enama-rotor emi kanye nemivimbo eqondile.
Isisindo: cishe amathoni ayi-12
Imoto: 132 kW
I-crusher ehloselwe imfucuza yendlu / imfucumfucu njll.
Amandla cishe amathani ayi-18-20 / ihora.
Imishini eyengeziwe iyatholakala, ngokwesibonelo ama-apron feeders.